အဝလွန်ခြင်း ၆ မျိုး - Hello Sayarwon
Dr . Phyu Mon Latt မှ ရေးသားသည်။ 14/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အရက်အလွန်သောက်ခြင်း၊ သကြားဓာတ်ပါတဲ့ အရည်တွေကို များပြားစွာသောက်ခြင်း
အပြင်မှာ ထွက်စားခြင်း – စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားတဲ့ အစာမစားခင် စားတဲ့အစာ (သို့) အချိုပွဲတွေမှာ အဆီနဲ့ သကြားဓာတ်တွေ မြောက်မြားစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
သူဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲချိန်တွေ ဖြစ်တဲ့ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ သွေးဆုံးချိန်တွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့ လူမှုနေထိုင်ပုံကို လေ့ကျင့်သင့်ပြီး သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းအကြံတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
1. Health risks linked to obesity, http://www.webmd.com/diet/obesity/obesity-health-risks#1 Accessed March 29, 2017.
2. What is obesity?, http://www.medicalnewstoday.com/info/obesity Accessed March 29, 2017
3. What is obesity? http://www.obesity.org/obesity/resources/facts-about-obesity/what-is-obesity Accessed March 29, 2017.
4. Childhood obesity on the rise in Vietnam, http://www.thanhniennews.com/health/childhood-obesity-on-the-rise-in-vietnam-29386.html Accessed March 29, 2017.
5. Obesity-Cause, http://www.webmd.com/diet/obesity/tc/obesity-cause Accessed March 29, 2017
6. 10 leading causes of weight gain and obesity (besides Willpower), https://authoritynutrition.com/10-causes-of-weight-gain/ Accessed March 29, 2017.
7. Cause of obesity, http://www.nhs.uk/Conditions/Obesity/Pages/Causes.aspx Accessed March 29, 2017.
8.6types of obesity and what you can do to solve each one, http://womensbest.net/6-types-of-obesity-and-what-you-can-do-to-solve-each-one/ Accessed march 29, 2017